2017 March 20 « QEERROO
Kan Sodaatan Du’aa kan hin Oolles Du’aa
March 20, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	1 Comment
Namichatuu baayyee sodaata jedhan.Namoota baayyee wajjin utuu karaa deemuu galgalli dhufnaan ,” maaloo nan sodaa dha jidduu keessan na rafisaa”, jedhee gaafate. Tolee jedhanii jidduu rafisan. Halkan sagalee wayyii dhaga’anii maalinni ? yaroo jedhan “calluma jedhaa anaani dha bocoqsaa jiraa”, jedhee jedhan.
Sodaachuun isaa nama marara. Namni hunduu wal qixxa onnee ykn gootumaa qaba jechuun hin danda’amu. Garuu jecha kana irraa baayyee kan nama gadisiisuu,” maaloo naaf dirmadhaa, naaf qaqqabaa, na qabatee jira”, jedhee iyyuu irraa warra fayyaa qabaniin, “calluma jedhaa “, jedhee ofii du’uuf filachuun isaa akka jiraatti sodaan ajjeessee jiru agrsiisa. Warri isa wajjin jiran sodaa waan hin qabanneef isa iyyuu lubbuu olshuu danda’u turan. Inni garuu waan sodaaf aboomamee jiruuf gargaarsa tokko utuu hin gaafatiinii fi utuu hin argatiin lubbuun isaa akka bilaashatti darbu godhe. Continue reading →
SAGALEE QEERROO Caamsaa 22, 2018
Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Waamaa Hagaloo magaalaa Qassootti duula haaromsaa maqaa jedhuun ergamtooti OPDO geggeessuufi uummata magaalichaa afaan faajjessuuf jedhan falalaawe
SBO: Caamsaa 20 2018. Oduu fi Qophiilee Haala Yeroo Irratti Fuuleffatan
SABBOONUMMAA LAMMAA MAGARSAA FI HUJUMMOO OLOLA ISAA(TPLF)
በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ በተመለከተ ከሕዝቦች ለነፃነትና ለፍትህ አባል ድርጅቶች ጋር የተደረገ ውይይት
SBO: Caamsaa 20 bara 2018. Oduu fi Qophiilee Haala Yeroo Irratti Fuuleffatan.
ONN:Oduu Idilee Olmaa Oromiyaa Kan Torbaan kanaa.Caamsaa 20/2018